Isivivinyo samahhala se-strava isikhathi eside kangakanani? - Ukudla
Main > Ukudla > Isilingo samahhala se-Strava - izimpendulo ezinkingeni
Isivivinyo samahhala se-strava isikhathi eside kangakanani?
I-Strava ayidingi isingeniso, kepha ngizoyinika noma kunjalo. Ingxenye yomsebenzi wokulandela umkhondo, ingxenye yenethiwekhi yezokuxhumana nabantu, ingxenye yokuhlela umzila, okuyingxenye yomlando wezigidigidi zamabhayisikili, ingxenye engiyithandayo kakhulu, i-Times Up Climbs Sure, yazi iqiniso lokuthi iwebhusayithi nohlelo lokusebenza kumahhala, kepha ezinye izici zikhona okutholakalayo kuyatholakala uma ukhokha okubhaliselwe okuncane futhi uba yilungu leStrava Summit sekuvele kunethoni yezici. Ngakho-ke uStrava wasicela ukuba sisisize sichaze.
Futhi kulesi sihloko sizodlula kokuthandwa kakhulu. Isici esaziwa kakhulu phakathi kwamalungu eSummit sihlobene namabhodi wabaphambili, ukumangala, empeleni, akunjalo? Ukuhlala kusofa nenkomishi yetiye bese ubheka ukuthi iStrava iphezulu yini kungenye yemisebenzi ephezulu yokuhamba ngemuva futhi amabhodi wabaphambili ngokuqinisekile angesinye sezinto ezingenze ngaba umlutha. Kepha kunezikhathi, mhlawumbe empeleni? izingxenye ezidumile lapho ungathanda ngempela ukwazi ukuthi uhlobana kanjani nokugibela okufanayo, mhlawumbe ubudala noma isisindo.
Ungakwenza lokho nje eStrava Summit. Ngamabhodi wabaphambili ahlungiwe. Isibonelo, uma ukhumbula i-athikili, hhayi kudala kakhulu ngazama ukungaphumeleli ukuthola i-KOMby ngokufaka imali enkingeni ngokuyisisekelo nangokwakha ibhayisikili elisheshayo ebengingalithola.
Uma ngiya kumabhodi wabaphambili ahlungiwe manje, empeleni ngithola umqhele. Yebo! Ngaphandle kokuthandwa kwabo, amabhodi wabaphambili ahlungiwe akuzona izici eziwusizo kakhulu zokuhamba ngemuva kwami. Esikhundleni salokho, ngicabanga ukuthi yikhono leStrava Summit ukukusiza ukuthi uhlaziye ukugibela kwakho ngombono wokuqeqeshwa kwabaqaphi bokushaya kwenhliziyo, impela ngokwanda kokugqokwa ongakuvumelanisa neyunithi yekhanda noma uhlelo lokusebenza oluhambisanayo, nalapho urekhoda isilinganiso senhliziyo yakho, IStrava Summit ngemuva kokuhamba kwakho, ungabona ukuthi uchithe isikhathi esingakanani ezindaweni ezahlukahlukene zokushaya kwenhliziyo.
Manje ukwazi ukuthi okuhlukahlukene kuyisihluthulelo sempumelelo ye-otraining, uzobona shazi ukuthi uyawathikha yini amabhokisi afanele wena nomsebenzi wakho wokuzivocavoca, noma ngabe ubhajwe ngamakhilomitha angenamsoco. Ngakho-ke ingabe uhamba kanzima ngokwanele futhi kulula ngokwanele, noma ngabe uku ndawo nje? phakathi? Uma futhi unemitha yamandla, iStrava ikunikeza nokwehla okufanayo, kepha ichaza ama-watts ngokungafani nokushaya ngomzuzu. Manje iStrava singasebenzisa ukushaya kwenhliziyo yakho ukuthola le Nombolo yaziwa njengomzamo ohlobene.
Futhi lokhu ngokuyisilinganiso kuyindlela yokuthi ukuqeqeshwa kwakho noma ukuhamba kwakho bekunzima kangakanani. Uma ujwayelene neStrava Leiden Score endala, ngakho-ke empeleni kungukuvela kwayo. Futhi kuyisilinganiso senani lomsebenzi wenhliziyo nemithambo yegazi obelinikelwe emsebenzini othile, ongadluliselwa kuyo yonke imikhakha, kanye nesici esihambisanayo, kufaka phakathi iqiniso lokuthi ihlukile ingeyakho, ngakho-ke akubheki ukuthi kanjani ubushesha kodwa uhambe kanzima kangakanani.
Okushoyo ukuthi ungalinganisa ukuthi ukujima okuphume kangakanani kuwe nokuthi kukalwe kanjani ukukalwe ezinkulungwaneni zemisebenzi ehlukene. UStrava uthi bakwazile ukwenza i-algorithm isebenzele ukusebenza okufushane, okunamandla nokuzikhandla okude, okuzinzile, ungabona ukuthi kusetshenziswe emasontweni nasezinyangeni ezimbalwa ezizayo bese ubona ukuthi isebenza kanjani ngesonto elinikeziwe liyanqamuka ngokwemigomo umzamo owuthathayo kuwe. Izingxenye ezibukhoma ezilandelayo.
Lokhu kupholile impela manje. Isebenza kuhlelo lokusebenza lwefoni, yize ngazi ukuthi abanye benu bagibela nefoni yakho kwi-handlebars yakho, engikusolayo kuyindlela yokuthakazelisa iningi lethu njengoba lingena emayunithi amakhulu ekhanda le-GPS lihlanganisiwe. Ngokuyisisekelo, kufanele uqale ingxenye lapho wenza lokhu, imininingwane ilayishwa ngokuzenzakalela kudivayisi yakho, okusho ukuthi lapho usondela kuyo empilweni yangempela, isikrini sakho sizoshintsha futhi esikhundleni sedatha yakho ejwayelekile, ingxenye izovela .
Kubonisa isikhathi sakho samanje kuyo, isikhathi sakho sokuphela esichaziwe kanye nesikhathi sakho samanje esingenakuqhathaniswa nokuhle kwakho komuntu siqu, okungcono kakhulu komuntu omlandelayo, noma isikhathi esihle kunazo zonke. Ithuluzi elihle lokuhamba ngesivinini, lizokusiza impela ukuthi uzuze kakhulu kuwe, futhi ngicabanga nokuthi kuhle ukusebenzisa imali eyengeziwe yokugqugquzela lapho ubuhlungu buqala khona. Okulandelayo kuyindlela yokuhlonipha isimo senhlalo seStrava ipulatifomu.
Ngaphandle kokuthi othile afakelwe amasethingi obumfihlo, enye yezinto ezinhle ngakho ukuthi uyabona ukuthi bashayela kuphi. Ungabona lapho izigidi zabantu zihambela khona njengamanje. Manje, esigabeni sokuhlela umzila, i-algorithm ye-Strava iyibhekela ngokuzenzakalela yonke le datha futhi ikuqondise ezindleleni zomgwaqo noma zomzila ezithandwa kakhulu, inkolelo-mbono edumile iyaqagela ngokulinganayo, kepha ngeStrava Summit unenye inketho futhi lokho unefayela elilodwa Lokulanda i-GPX elinomzila womunye umuntu olithandayo.
Lokho kungaba uchwepheshe wendawo, kungaba nomthelela, kungaba ngumngani noma omunye umuntu osebenza naye. Endabeni yakhe, ngizoba nguDkt. Oliver Bridgewood GCN.
Ukusebenza kabusha kwakhe izolo. Manje udinga ukuvula inguqulo yedeskithophu, hhayi uhlelo lokusebenza. Kepha uzobona uma uqhafaza ku-Activity, ekhoneni lesikrini semephu kunesithonjana sokulanda se-GPX, ngakho-ke ake siyishaye, silande ifayili, bese sililayisha kudivayisi oyikhethayo.
Uma ushayela wedwa bekulokhu kubalulekile ukwazisa umuntu ukuthi ukuphi lapho uhamba futhi manje ubuchwepheshe buyakuvumela, kuwumqondo omuhle ukubazisa empeleni ukuthi ubukhoma. Lokhu yinto engiyenza njalo njalo uma ngishayela kulezi zinsuku. Kunezinketho ezimbalwa ezahlukahlukene zalokhu, kepha iStrava Summit inenye eyenzelwe abagibeli bamabhayisikili nabagijimi ngokufanayo.
Ibizwa ngokuthi yisibani. Ngokuyinhloko njalo lapho uqala ukurekhoda umsebenzi, kungaba kuhlelo lokusebenza, ku-Garmin, noma ku-Apple Watch, kunenketho yokuthumela umyalezo koxhumana nabo abangafika kwabathathu. Manje usuzothola lo mbhalo, oqukethe isixhumanisi somsebenzi wakho.
Ungayibuka noma ungenayo iphrofayili yakho ye-Strava. Kulula, kepha kunezinye izici ezengeziwe futhi, njengokukhombisa impilo yebhethri lakho futhi empeleni ube nesikhathi sokugcina lapho unebhip yefoni ukubona ukuthi ukhona ngempela lapho. Ingqungquthela yokugcina yaso sonke isikhathi engeza kulokhu ithuluzi lokuqina nokuqina.
Ngakho-ke uma usebenzisa isilawuli sokushaya kwenhliziyo ukuze iStrava ikwazi ukubala ukuzikhandla kwakho okuhlobene, futhi uma usebenzisa imitha yamandla ukuze ikwazi ukubala umthwalo wakho wokuzivocavoca, lokhu kungadweba igrafu yesimo sakho ngokuhamba kwesikhathi. Manje isici sokuqina sibalwa kusetshenziswa ubuchule be-Strava zone algorithm ngokuya ngomsebenzi ofakazelwe ngu-Erik Banister no-Andy Cogan. Ukuqina okubonayo kuhlala kuhlala kuqhathaniswa ngokuhamba kwesikhathi, kuyafana, kunjalo-ke kubonisa ukukhathala kwakho futhi okuphendula kakhulu.
Uyabona ukuthi iqala ukuhamba kakhulu ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ezinzima, kepha iyehla ngokushesha nje ngemuva kokuthi uqale ukwephuka. Futhi kuyindlela enhle yokubona ukuthi ukhathele kangakanani empeleni ungaba nomsebenzi wakho wokuzivocavoca ukulandela okwenzile. Uma uhlanganisa lokhu okubili, uthola lowo mugqa wesikwele phezulu oyisimo sakho.
Vele akukho phuzu ekumemezeni kufanelekile, usukhathele ngokuphelele, ngakho-ke ifomu lakho likukhombisa uma usunebhalansi elungile, mhlawumbe uma uya kumcimbi, ngoba uma uthola okusha kakhulu, bese uqala ukulahlekelwa ukufaneleka Ukunciphisa umsebenzi wokuqagela womcimbi noma inhloso okumele izuzwe. Lokhu akusizi kuphela kubantu abanjengami, abavame ukushayela ngokufana kakhulu ngaso sonke isikhathi, kepha futhi kukunikeza umkhondo wokuthi kufanele ushintshe izinto noma cha. Ngakho-ke le yimisebenzi yakho ebaluleke kakhulu yeSummit.
Kunokuningi okuningi, njengamamephu oshisayo enziwe ngezifiso, amahle kakhulu futhi akunikeza ukubuka konke ukuthi uke waba kuphi futhi kaningi kangakanani eStrava, kanye nezinhlelo zokuqeqesha kanye nejika lakho lokusebenza. Uma ufuna ukuzizamela khona-ke uStrava unobungane kakhulu enikeza wonke umuntu isivivinyo samahhala sezinsuku ezingama-30 esiya lapho ngemuva kwalesi sihloko. Isixhumanisi salokhu sisencazelweni engezansi.
Manje, okwamanje, uma ungathanda ukuthi ngiphenduke ngizame ukubuyisa i-COM ungafika kule ndatshana ezansi lapho. Ngaphandle kwalokho, nikeza lena isithupha esikhulu.
Ingabe kukhona isivivinyo samahhala se-strava?
NomaUkudlainikeza isikhathi esideicalaisikhathi,itisusa izici ezazikhona phambilinimahhala. UDowman uyanezela:Itkuzoba mnandi kakhulu ukubona ukuthi kwenzekani kuiukuphela kwe-iIzinsuku ezingama-60icalaIsikhathi lapho abasebenzisi sebethole ithuba lokuhlola konkeiizinzuzo ezintsha nemisebenzi.30. 2020.
Ungakwazi ukukhansela isilingo samahhala se-strava?
Isibonelo, i-Google Play yeI-Androidapp kanye ne-iTunes yohlelo lokusebenza lwe-iPhone, njll Kukhanselaokubhaliselwe kusebenze ku-Ukudlaiwebhusayithi: Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho bese uzulazulela kuzilungiselelo kumenyu engaphansi kwesithombe sakho ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Khetha i-Akhawunti Yami> Yehlisela kumahhalaukuhlela.
Ngilusebenzisa kanjani ucwaningo lwami lwe-strava?
Bhangqa idivayisi ku-akhawunti yakho ye-Garmin Connect.
Chofoza Imenyu (imigqa emithathu ekhoneni eliphezulu kwesokunxele)
Khetha u-Faka ku-Ideshibhodi ye-Segment Widget.
Khetha isithonjana seGear (ekhoneni eliphezulu kwesokudla sewijethi)
Ngena ngemvume / dalaUkudlai-akhawunti.
Ingabe kufanelekile ukukhokhela i-strava?
Kwavela,UkudlaIngqungquthela ifakazele kakhulukuwufaneleit. Manje njengoba sengazi ukuthi iziphi izici ezingafakwanga enguqulweni ejwayelekile, angicabangi ukuthi ngingahle ngiyeke ukubhalisa kwami ​​kwe-premium. Izici zami ezisetshenziswa kakhulu yimisebenzi ehambisanayo, ilog yokuqeqesha, ne-GAP.
Uthola ini nge-free strava?
I-mahhalainguqulo yeUkudlainikeza ukulandelwa komsebenzi, okuphakelayo kwemidiya yezenhlalo, amandla okwenzatholaimicimbi yokufaneleka kwasendaweni, nokuningi.UkudlaIngqungquthela inika amandla imigomo yokuzilolonga yangokwezifiso, ubuhlanga nokuhlaziywa kokusebenza, amandla wokuziqhathanisa nabanye abasebenzisi, nokuningi.1. 2020.
Ingabe i-strava ibiza ukubhaliswa?
TOIzindleko zokubhalisa ze-Strava$ 5 ngenyanga ngonyakaokubhaliselwe. Abasebenzisi abasha bangathola izinyanga ezimbili zokuqala mahhala lapho bebhalisela unyaka wonke, futhi.19.05.2020
Ngisebenzisa kanjani iStrava mahhala?
Okwe-smartphonesebenzisa, uzodinga ukuba ne-Ukudla kwamahhalauhlelo lokusebenza lufakiwe. Vele uvule isitolo sakho sohlelo lokusebenza (i-App Store yama-iPhones ne-Google Play yeI-Androiddevices), seshaUkudla, bese ulanda uhlelo lokusebenza. Kukhompyutha yakho, kulula kakhulu: Vula isiphequluli sakho sewebhu bese uya kuukudla.nge.6. 2020.
Ingabe i-strava iwufanele u-2020?
Ziyini izinzuzo zokukhokhela i-strava?
Idatha Yokusebenza Okubukhoma: Ijubane, ibanga, nendawo, ngesikhathi sangempela, kudivayisi yakho yeselula. Ukuhlaziywa Kwejubane: Bona ngeso lengqondo izindawo zakho zejubane nedatha yamathanga yakho konke ukusebenza kwakho okusebenzayo. Izindawo Zezilinganiso Zenhliziyo Ezijwayelekile: Qeqesha ngobuchule ngesiqaphi sokushaya kwenhliziyo.18 2021.
amaholidi amabhayisikili asezintabeni
Ingabe kukhona isivivinyo samahhala seStrava Summit?
Ungakhansela kalula ngokushesha kuzilungiselelo / kuma-akhawunti futhi usaqhubeka nokulingwa kwamahhala izinyanga ezintathu. Ngezansi kukhona izici eziyinhloko.
Ingabe akhona amakhodi wokukhushulwa wamahhala we-Strava?
Ukubhaliswa kwamahhala kwezinyanga ezi-2 - Bhalisa namuhla bese uthola ukubhaliswa kwamahhala kwezinyanga ezi-2 ngaphandle kokusebenzisa ikhodi ye-Promo. BSN2018 - Thola isaphulelo esingu-20% ekuthengeni. I-oda le-ZENTRI - 50% OFF. AL2M11 - Thumela amakhodi ephromo we-strava ngenkathi ubeka uhlelo lokubhalisa lwenyanga eyodwa bese uthola enye indiza mahhala.
Uphume nini uhlelo lokusebenza lokuqala lweStrava?
I-Strava.com yasungulwa ekuqaleni kuka-2000. Ekuqaleni, isoftware yayo negajethi yayitholakalela ochwepheshe kuphela kepha manje bayayinikeza nabantu abakhubazekile. Manje akudingeki ukhathazeke ngokusebenza kwakho noma ngabe ukhubazekile noma unokukhubazeka okuthile.